Rasaasa News – Hargeysa: Wasiiro Dhaawaca iyo Xildhibaano Dhintay
Hargeysa: Wasiiro Dhaawaca iyo Xildhibaano Dhintay
on March 20, 2014 4:57 pm
Jijiga March 20, 2014 – Wararka ka imanaya xarunta Ismaamulka Somalida Somaliland [ISS] ee Hargeysa, ayaa sheegay tiro wasiiro ah ay dhaawacmeen tir xildhibaano ahna ay dhinteen, ka dib kolkii ay is duqeeyeen baabuur badan [multi car accidents] oo ay saaraayeen xukuumada madaxwayne Siiraanyo.
Shilka ayaa ka dhacay meel wax yar uun u jirta magaalada Burco, oo ay saaka ka soo ambabaxeen waftigii uu hogaaminayey madaxwayne Siiraanyo. Halkaas oo ay is-hardiyeen ugu yaraan lix baabuur oo ay saaraayeen golaha fulinta iyo golaha baarlamaanka ee ismaamulka Somaliland.
Dadka dhaawaca waxaa ka mid ah; wasiirka caafimaadka Saleebaan Xagla-toosiye, wasiirka Warfaafinta Cukuse, Af-hayeenka Madaxtooyada Axmed Saleebaan dhuxul iyo xildhibaanka Boorame Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle.
Dadka dhintay ee la magac dhabay waxaa ka mida Caqil Cabdi Mohamoud Egal.
Waftiga uu hogaaminayey madaxwayne Siiraanyo oo loo diyaariyey dadwayne badan soo dhawayntooda, ayaa galabta xaaladii loogu talo galay mid ka badalan kula soo laabatay Hargeysa